Ihe ngosi Xiaomi Mi na 10 na Mi Note 10 Pro na-enweta Android 11 | Gam akporosis
Amalitere na Nọvemba 2019 dị ka smartphones mbụ na ihe mmetụta sensọ MP 108, the Xiaomi Mi Rịba 10 na Mi Rịba 10 Pro Ugbu a ị na-anabata ngwugwu ọhụụ ọhụụ, mmelite na-ewetara gị gam akporo 11 n'ebube ya niile.
Ngwa ndị a na-ajụ ajụ enwetaworị mmelite a site na OTA na Jenụwarị, mana ọ bụ naanị na China. Ugbu a mmelite ahụ amalitela ịmalite ụwa niile, yabụ ọ bụ naanị oge tupu nkeji niile nke ndị a enweta ya. Na mbu, a na-enye ya na Europe, yabụ ọ kwesịrị ịdị ugbu a maka ndị ọrụ na mpaghara ahụ.
1 Ihe ngosi nke gam akporo 11 biara na Xiaomi Mi Note 10 na Mi Note 10 Pro
1.1 Akụkụ nke Xiaomi Mi Rịba 10 na Mi Note 10 Pro
Ihe ngosi nke gam akporo 11 biara na Xiaomi Mi Note 10 na Mi Note 10 Pro
Ihe nyocha Mi na 10 na Mi Note 10 Pro bụ ọdịiche zuru ụwa ọnụ nke Mi CC9 Pro na Mi CC9 Pro Premium Edition nke malitere na India. Ngwaọrụ ndị a, dịka anyị kwuru nke ọma, nwetara gam akporo 11 na mbido afọ, mana naanị na China, ebe a hapụrụ ndịiche ụwa ruo ugbu a.
Mmelite ahụ na-abịa na nọmba ụlọ ewu V12.1.3.0.RFDEUXM y na-eweta ọkwa nchekwa nchekwa nke February 2020. Ke adianade do, ọ na-abịa na ọtụtụ ahụhụ fixes, usoro ndozi, na otutu optimizations na ịhụ iji hụ a mma ọrụ ahụmahụ.
Site ugbu a gaa n'ihu, dị ka akọwara na ọnụ ụzọ GSMArena, ewu ihe a di na 'beta beta' ya mere ọ nwere naanị ọnụọgụ ole na ole nke ndị ọrụ, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị oge tupu ọ gbasaa ruo ọtụtụ ndị ọzọ. Ka o sina dị, mmelite ahụ, nke a na-enye ugbu a site na OTA, kwesịrị ịdị maka ndị ọrụ niile na ụbọchị ole na ole sochirinụ.
N'ihi na mobiles a na-enweta naanị abụọ isi gam akporo mmelite na ndị a tọhapụrụ na gam akporo 9.0 achịcha, Android 11 bụ nsụgharị ọhụrụ nke Google OS maka mobiles ị ga-enweta. Agbanyeghị, ha ga na-enweta mmelite oge niile na ihe nchekwa, ndozi, na nkwalite dị iche iche nwa oge. E wezụga nke ahụ, ha ga-enwetakwa ụdị MIUI ọzọ na; ugbu a nwere MIUI 12.
Akụkụ nke Xiaomi Mi Rịba 10 na Mi Note 10 Pro
N’ịtụleghachi ntakịrị akụkụ ndị dị na ekwentị ndị a, anyị hụrụ na Mi Note 10 na-abịa na ihu igwe teknụzụ AMOLED, mkpebi FullHD + nke pikselụ 2.400 x 1.080 na diagonal nke 6.47 sentimita asatọ. Otu n'ime ụdị Pro nwekwara njirimara ndị a, ya na sentimita 6.47.
N'aka nke ọzọ, ngwanrọ mkpanaka ha na-etu ọnụ bụ otu maka ha abụọ, nke a bụ Qualcomm's Snapdragon 730G, chipset asatọ nwere isi ihe na-arụ ọrụ na nkeji elekere kacha elu nke 2.2 GHz ma soro ya Adreno 618 GPU. a ghaghi itinye nke a 6 GB Ram na Mi Note 10 na 8 GB otu maka Pro variant. na nke mbu, enwere 128/256 GB nke ROM, ma nke abuo o bu nani nsụgharị nwere 256 GB bụ ebe nchekwa dị n'ime.
Usoro igwefoto nke njedebe nke etiti etiti bụ otu maka ma otu na nke ọzọ. Nke a dị okpukpu ise ma mejupụta oghere lens 108 MP, telephoto 12 MP, telephoto 8 MP ọzọ, 20 MP wide wide and a 2 MP macro shooter. N'ezie, modul ahụ nwere ihe ngosi ọkụ maka ọkụ gburugburu ebe gbara ọchịchịrị. Onye na-agba agba n'ihu maka selfies na oku vidiyo nwere mkpebi nke 32 MP.
N'ihe banyere obodo kwụụrụ onwe ha, ha abụọ nwere batrị ikike 5.260 mAh nwere teknụzụ 30 W ngwa ngwa, nke nwere ike ịgba 58% na 30 nkeji ma ruo 100% na naanị 65 nkeji. Akụkụ ndị ọzọ nke ekwentị ndị a gụnyere onye na-agụ akara mkpisi aka n'okpuru ngosi, ọdụ ụgbọ USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, NFC, na GPS nwere A-GPS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe ngosi Xiaomi Mi na 10 na Mi Note 10 Pro na-enweta mmelite nke gam akporo 11
Huawei nwere ike belata mmepụta ekwentị ya na ọkara afọ a